शिक्षामा अब्बल अरुणोदय « Loktantrapost
शिक्षामा अब्बल अरुणोदय
३१ चैत्र २०७३, बिहीबार ११:४८
शिक्षा र खेलकुदको क्षेत्रमा एउटा बेग्लै पहिचान बनाएको विद्यालय हो अरुणोदय अंग्रेजी आवसीय विद्यालय काँकरभिट्टा । विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा पनि अब्बल स्थानमा रहेको यो विद्यालय युवा व्यक्तित्वहरुद्वारा सञ्चालित छ । काँकरभिट्टा बजारबाट ५ सय मिटर दक्षिणमा शान्त तथा रमणीय वातावरणमा अवस्थित छ । काँकरभिट्टा क्षेत्रमा भए पनि बजारको कोलाहलले कुनै प्रभाव पारेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ २०५२ सालमा विद्याालय स्थापना भएको थियो । २१ वर्षको अन्तरालमा विद्यालयले थुप्रै आरोह अवरोह पार गरेको छ ।
२०५२ सालमा स्थापना भए पनि अहिलको यो टिमले २०६७ सालबाट विद्यालयको व्यवस्थापन सम्हाल्दा विद्यालयमा ५० जना विद्यार्थी थिए । युवा सर्कलको समूहले सञ्चालन गर्न सुरु गरेपछि विभिन्न योजना र विद्यालयको भविष्यप्रति सधैँ क्रियाशील रहेर उनीहरु लागि परे । जसको परिणाम स्वरुप विद्यालयले छोटो समयमा नै ठूलो उपलब्धी प्राप्त गर्न सफल बन्यो । हाल विद्यालयमा ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अभिभावकको विश्वासलाई सहजै जित्न सफल भएको विद्यालयले उनीहरुको नानीहरुको पढाइमा दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । बौद्धिक विकास, चरित्र निर्माण र अनुशासनलाई मुख्य विषयका साथ लागि परेको विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक संस्कार समेत सिकाउन सफल भएको छ ।
‘हामी सधैँ विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित छौँ’, विद्यालयका प्रिन्सिपल दुर्गाबहादुर लुइँटेलले भने– ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरुलाई राम्रो गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यदि लगानी गरेर मात्र त्यसलाई प्रभावकारी
रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । हामी जागिर खोज्ने होइन, जागिर प्रदान गर्ने शिक्षा दिन चाहन्छौँ ।’
खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा जिल्लामै निरन्तर अब्बल रहेको यस विद्यालयले एन प्याब्सन झापाले आयोजना गरेको वार्षिक कार्यक्रममा २०७२ सालबाट लगातार २ वर्षदेखि जिल्ला प्रथमको उपाधि हात पार्दै आएको छ । साँस्कृतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल रहेको विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई पढाइसँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी
गराउन सफल भएको छ । जिल्लामा हुने हरेक साँस्कृतिक कार्यक्रममा कुनै न कुनै उपाधि ल्याउन सफल भएको छ ।
‘पढाई मात्र सिकाइ होइन’, विद्यालयका अध्यक्ष भगिरथ राईले भने–‘पढ्न जान्नेले पढेर खाला तर, पढ्न नस्कने कमजोर विद्यार्थीले पनि भविष्यमा केही गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसैले जो विद्यार्थी जुन क्षेत्रमा अब्बल छ, त्यसैमा उसलाई प्रेरित गर्दै हामीले उनीहरुलाई अवसर दिँदै आएका छौँ ।
हामी अभिभावकले तिरेको शुल्कको एक–एक हिसाब पूरा गरेर देखाउँछौँ । ताकि उहाँहरुलाई आफ्ना नानीहरुका लागि गरेको खर्च खेर नजाओस् ।’ फुटबल, चेस र व्रिmकेटका क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका खेलाडी समेत उत्पादन गर्न सफल भएको विद्यालयले आगामी दिनमा हरेक विधाका खेलाडी उत्पादन गर्ने दौडमा छ ।
‘गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध छौँ’
प्रिन्सिपल तथा कार्यकारी निर्देशक
स्कुल राम्रो बनाउन र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि के–के कुरामा ध्यान दिँदै आउनु भएको छ ?
–हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीको पढाइका अतिरिक्त विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विविध अतिरिक्त क्रियाकलापमा ध्यान दिदै आएका छौँ । हामीले अहिले घ क् यानिकी क्तगमथ, क्उयचतक ७ क्तबलमबचम ९त्तगबष्तिथ० मा जोड दिइरहेका छौँ । यसको परिणाम स्वरुप खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रमा हामी झापामै एक अब्बल विद्यालयको रुपमा चिनिएका छौँ । हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षामा प्रथम र द्वितीय स्थान हासिले गर्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएका छौँ । यसका अतिरिक्त हामीले खेलकुद क्षेत्रका उत्कृष्ट ७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौँ ।
स्कुलले प्रगति गर्नुका कारण के हो ?
– दक्ष शिक्षक, शिक्षिका, परिश्रम गर्ने हाम्रा होनाहार विद्यार्थी, अभिभावकहरुको हामीप्रतिको विश्वास र सहयोग नै स्कुल यो अवस्थासम्म आउन सक्ने मुख्य माध्यम हो । यसैगरी कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीको सम्बन्ध नङ र मासुको झैँ हुनुपर्छ । त्यो त्रिपक्षीय सम्बन्ध हामीले कायम गर्न सकेका छौँ । हामी हरेक समय विद्यार्थीले गरेका गतिविधिलाई अभिभावक समक्षा पु¥याउँछौँ र अभिभावकहरुसँग राय सुझाव लिन्छौँ । उनीहरूको सल्लाह अनुसार विद्यार्थीको चौतर्फी विकास गराउन हामी तत्पर हुने गरेका छौँ । साथै शिक्षक–विद्यार्थी र शिक्षक अभिभावकबीचको अन्तरक्रिया पनि गर्दै आएका छौँ । यो नै हामीले पाएको सफलता हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
विद्यालयका सुविधा र विशेषताहरु के–के छन् ?
– स्वच्छ, शान्त, बालमैत्री शैक्षिक वातावरण
– दक्ष, अनुभवी तथा उत्तरदायी शिक्षकहरु
– उच्च प्रविधियुक्त कक्षाकोठाहरु
– उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था
– बालकक्षाहरुमा एटेज ट्वाइलेट बाथरुमको सुविधा
– प्रशस्त खेलकुद तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप
– स्कुल बसको सुविधा
– आधुनिक कम्प्युटर ल्याव भएको
– पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला
– २४ सै घण्टा सीसी क्यामेराको निगरानी भएको
– दिवा तथा रात्री होस्टलको सुविधा भएको
– सीप विकास कार्यव्रmम
– विद्यार्थी केन्द्रीत व्यवहारिक सिकाई क्रियाकलाप
– निरन्तर शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया
‘हामी जागिर खोज्ने होइन, जागिर प्रदान गर्ने शिक्षा दिन चाहन्छौँ ।’
अध्यक्षः व्यवस्थापन समिति
‘छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्ने विद्यालयको सूचीमा अरुणोदय पुगेको छ । यो अहिले अभिभावकको पहिलो रोजाई बन्दै गइरहेको छ ।’
शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष